ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးချိန် ပျို့အန်မှုများမဖြစ်စေဘဲ အာဟာရပြည့်ဝနေစေမည့် နည်းလမ်း (၁၁)ခု - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရ » ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးချိန် ပျို့အန်မှုများမဖြစ်စေဘဲ အာဟာရပြည့်ဝနေစေမည့် နည်းလမ်း (၁၁)ခု
ရေးသားသူ Dr. Saw Yu Win
Author:	Dr. Saw Yu Win	Oncologist
ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးချိန်တွင် လူနာအများစုတွင် ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ခြင်း စသည့်ဝေဒနာတို့ကို ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။ ထိုအခါ အစားစားချင်စိတ်ပျောက်သည့်အတွက် အစာများကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ အစာလျော့စားခြင်းပြုလုပ်ပါက ခန္ဓါကိုယ်တွင် အာဟာရဓါတ်နည်းပါးသည့်အတွက် ကင်ဆာဆေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ပျို့အန်ခြင်းကို တွန်းလှန်ပြီး အစာများကိုစားနိုင်ရန် အောက်ပါအချက်တို့ကို လိုက်နာသင့်ပါသည်။
၁။ အာဟာရဖြစ်သည့်မည်သည့် အစာမဆို (သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော) စားနိုင်ပါသည်။
၂။ ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးချိန်တွင်လည်း အစားအသောက်ပျက်သည့်အတွက် တစ်ခါစားလျှင် အစာပမာဏ အနည်းငယ်ကို အကြိမ်များစွာ စားပေးခြင်းသည် ပိုမို သင့်လျှော်ပါသည်။ ( ဥပမာ သာမန်လူတို့သည် တစ်နေ့လျှင် အစာကြီး ၃ နပ်စားနိုင်သော်လည်း ဆေးသွင်းပြီး မစားချင် ပျို့အန်သူများအနေဖြင့်အစာကို တစ်နေ့လျှင် ၅ ခါ ၆ ခါခွဲ၍ တစ်ခါစားအနည်းငယ်သာစားပေးပါက အစာပိုဝင်နိုင် ပါသည်။
၃။ စားသည့်အစာတို့တွင် ပရိုတင်းဓါတ်ပါသော အစာများ – အသား၊ ကြက်ဥ၊ ထောပတ် စသည်တို့ပါသင့် ပါသည်။
၄။ ရေကို အစာစားချိန်တွင် ပြည့်နင့်အောင် မသောက်ပါနှင့်။ ရေများများသောက်ပါက ဗိုက်တင်းပြီး အစာစားချင်စိတ် ပိုမိုလျော့နည်းနိုင်ပါသည်။
၅။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ထိုမှသာ အစာကြေလွယ် ၊အစာဆာလွယ်ပြီး အစာစားချင်စိတ်ဖြစ်နိုင်ပါမည်။
၆။ အစားအသောက်ပျက်နေချိန်တွင် မိမိအာသီသရှိသော၊ မိမိကြိုက်သော၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော မည်သည့်အစာကိုမဆို စားသုံးနိုင်သော်လည်း ပျို့အန်ခြင်းလျော့နည်းစေရန်အတွက် အနံ့မပြင်းသောအစားအစာများကို ရွေးချယ်စားသောက်သင့်ပါသည်။ အစာများသည် ပူပူလောင်လောင်အချိန်တွင် အနံ့ထွက်နိုင်သည်။ အအေးခံ၍စားခြင်းဖြင့် အနံ့ထွက်နည်းစေသဖြင့် အစာအနံ့ကြောင့် ပျို့အန်ချင်သောစိတ်ကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။
၇။ အစာကိုထိုင်၍စားခြင်းဖြင့်လည်း ပျို့အန်ခြင်းသက်သာစေနိုင်ပါသည်။
၈။ ချင်း(ဂျင်း)သည်ပျို့အန်ခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သဖြင့် ချင်းပါသောအစာများကိုလည်း စားသုံးနိုင်ပါသည်။
၉။ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးများကြောင့် ပါးစပ်ရောင်ခြင်း၊ ပါးစပ်တွင်အနာဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သဖြင့် အစာပျော့ပျော့ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါသည်(ဥပမာ စွပ်ပြုတ်)။ စပ်လွန်း၊ပူလွန်း၊ငန်လွန်းသောအစာများကိုမူ ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။
၁၀။ ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီးနောက် ဝမ်းချုပ်ခြင်းဝေဒနာကို လူနာအများစုခံစားရလေ့ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရေများများသောက်ပေးခြင်း၊သဘာဝအသီးဖျော်ရည်သောက်ခြင်း၊ရာသီစာဝမ်းနူးစေသော သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အသီးအနှံများကို စားသုံးနိုင်ပါသည်။ ခန္ဓါကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်လည်း အာဟာရသင့်တင့်မျှတသော အစာ (Balanced Diet) ကို စားသုံးသင့်ပါသည်။ ၎င်း Balanced Diet တွင် fiber အသီးအရွက်၊ protein အသားဓါတ်၊ whole grain အနှံများ စုံလင်စွာပါဝင်သင့်ပါသည်။
၁၁။ မုန့်ခြောက်၊ ပေါင်မုန့်၊အချိုပါသောမုန့်တို့တွင် အာဟာရဓါတ်နည်းနိုင်ပါသည်။ ချိုလွန်းသောအချိုရည်များ (commercial Beverages, Sweetened tea, Sugar Laden drinks) များ မသောက်သုံးသင့်ပါ။ လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပရိုတင်း (အသားဓါတ်) ပါသောအစားများ၊ Whole grain အနှံများသည် အသင့်တော်ဆုံးအစာများဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီး ပျို့အန်ခြင်းလျော့နည်းကာ အစားများများစားနိုင်ခြင်းဖြင့် ကင်ဆာဆေးဒဏ်ကို ခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 19, 2019
Dr. Saw Yu Win Oncologist
ဒေါက်တာစောယုဝင်းသည် ကင်ဆာရောဂါဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ...
ဒေါက်တာစောယုဝင်းသည် ကင်ဆာရောဂါဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပဲခူးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ကင်ဆာအထူးကုဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။
Dr. Saw Yu Win